Dezie MP4, MKV, Flv, MOV na ndị ọzọ Formats na VirtualDub
VirtualDub bụ a free video kpọọ / nhazi ngwá ọrụ na Windows nyiwe (gụnyere 2000 / XP / Vista / 7). The edezi ọrụ ma eleghị anya ọ dị ike dị ka n'ozuzu-nzube editọ dị ka Adobe Premiere na Sony Vegas, ma ọ na-apụta ihe ngwa ngwa linear arụmọrụ n'elu video. Ebe a bụ ụfọdụ bara uru Atụmatụ-enyere gị aka inweta ihe kasị nke VirtualDub.
Dezie ọ bụla Formats
Dị ka ị maara, VirtualDub, dị ka nguzo-nanị, ike aka MP4, MKV, Flv, MOV ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ faịlụ e wezụga AVI. Ma, e nwere na ka ụzọ mara ha na nke a video edezi software. Ugbu a nwalee ndị na-esonụ atọ ụzọ dị iche iche na-eji ndị ọzọ faịlụ formats dị ka ọsọ ọsọ na VirtualDub ọzọ karịa AVI.
Method 1: Mepụta ihe AVISynth akwukwọ
Usoro 2: Download plugins maka dị iche iche formats
Method 3: tọghata MP4, MKV, Flv, MOV na ndị ọzọ na formats ka AVI
Method 1: Mepụta ihe AVISynth edemede
Ọ bụrụ na ị maara otú otú iji AVISynth, ị pụrụ nanị emeghe iche iche iche iche video formats na VirtualDub. Ihu ọma, na-arụ ọrụ dị ka nke a: Akpa, ị mepụtara a dị mfe ederede akwụkwọ pụrụ iche nyere n'iwu, na-akpọ a edemede. Iwu ndị a na-eme na-ezo aka otu ma ọ bụ karịa videos na nzacha na ị chọrọ na-agba ọsọ na ha. Mgbe na ị na-agba ọsọ VirtualDub na-emeghe akwukwọ faịlụ. Mgbe ahụ VirtualDub adịghị maara na AVISynth na-arụ ọrụ na ndabere, ma eche na ọ bụ kpọmkwem mmeghe a ẹdụk AVI faịlụ. Ugbu a, ka anyị hụ otú ime ka anwansi eme:
1. Wụnye K-lite Codec Pack na update FFDShow
Mbụ, hụ na iche faịlụ bụ playable na Windows Media Player. Ya mere, ị mkpa wụnye mkpa codecs gị na kọmputa. K-lite Codec Pack nke mgbe nile na-enye ọhụrụ na zuru ezu codecs bụ nnọọ mma. Ị nwere ike họrọ a kwesịrị ekwesị mbipute na-ahọrọ codecs gị mkpa.
Wee mepee lekwasịrị video faịlụ na Windows Media Player na ọ ga-egwu. Bụrụ na ọ bụghị, ị kwesịrị ị imelite gị FFDShow ka ọhụrụ version.
2. Wụnye AVISynth
Mgbe ahụ ibudata ma wụnye AVISynth, na nne Mmetụta niile nhọrọ n'oge nwụnye.
3. Mepụta ihe AVISynth Edemede
Open Notepad. Pịnye DirectShowSource ("c: \_ locationto \_ video.mp4"). Mgbe ahụ dochie c: \_ locationto \_ video.mp4 na ọnọdụ gị video faịlụ (nri pịa video faịlụ iji nweta ọnọdụ). Mgbe ahụ na-aga "File"> "Zọpụta dị"> "Save dị ka Ụdị: All faịlụ" na aha gị video faịlụ dị ka video.avs. Ị nwere ike ugbu mbubata video.avs faịlụ na Virtualdub.
Video nkuzi: Mepụta ihe AVISynth edemede
Plugins nwekwara ike aka n'idebata dị iche iche faịlụ formats. Ị nwere ike ibudata plugin gị mkpa, na itopusi ya n'ime VirtualDub plugin nchekwa. Ma cheta na ndị na plugins naanị ekwe ka ị mara ụfọdụ faịlụ formats. Ị nwere ike ịzọpụta ndị faịlụ na MP4, MOV, FLV na ndị ọzọ na formats, ma na AVI. Ebe a abụọ plugins na-atụ aro:
# 1. Ffmpeg Input Driver: The plugin dabeere, dị ka aha nwere ike na-atụ aro, nke ffmpeg ọba akwụkwọ. Ọ nwere ike ijikwa 31 dị iche iche faịlụ formats, n'etiti ha bụ ndị na-ewu ewu MP4, MKV, Flv, MOV, RM, RVMB, WMV na TS.
# 2. fccHandler: Ọ nwere ike ijikwa MPEG-2, FLV, WMV, MKV, FLC nakwa dị ka AC-3 ACM codec. Otú ọ dị, ya website bụ dịghịzi adị na oge n'ihi na ụfọdụ ihe. Ma e nwere abụọ enyo ya stof: Mirror 1, Mirror 2.
Ụzọ ọzọ dezie MP4, MKV, Flv, MOV na ndị ọzọ na formats na VirtualDub bụ iji tọghata ya AVI mere na ị nwere ike mbubata media n'ime ngwa. Wondershare Video Converter Ultimate Bụ na-atụ aro usoro ị nwere ike iji maka ọrụ a.
• Easily tọghata MP4, MKV, MOV, FLV na ndị ọzọ na formats ka AVI.
• Gbanwee video ntọala dị ka codec, bit ọnụego, mkpebi dị ka gị mkpa.
• hazie video site trimming, cropping, n'usoro n'usoro, na-agbakwunye mmetụta, wdg
• kasị akakabarede ọsọ na-enweghị àgwà ọnwụ.
1. Tinye video faịlụ ka usoro ihe omume
Tinye gị video faịlụ jidesie usoro ihe omume ma site na ịpị "Tinye Files" na-agagharị na mpaghara gị ndekọ ma ọ bụ adaba ikpuru-na-dobe atụmatụ.
2. Họrọ AVI dị ka mmepụta format
Mgbe ahụ dị nnọọ pịa "mmepụta Format" ndọpụta ndepụta ma họrọ AVI dị ka mmepụta usoro. I nwekwara ike kọwaa encoder na gear-dị ka "Mwube" nhọrọ, dị ka e gosiri ihe oyiyi ahụ.
3. Malite akakabarede usoro
Pịa "tọghata" mgbe ihe nile dị njikere na mgbe ahụ akakabarede ga-agwụ agwụ-akpaghị aka. Ị nwere ike ịchọta converted faịlụ site na ịpị "Open nchekwa".
Ugbu a dị ka i nwere ike imeghe iche iche iche iche video na Virtualdub, dị nnọọ ka ojiji nke a software eme ụfọdụ video edezi dị ka amasị gị. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka eji oge dị ukwuu na-etinye formats ka VirtualDub, ị nwere ike ịnwale VirtualDubMod, nke na-akwado ọtụtụ ihe ndị ọzọ formats dị ka MP4 na MKV (Otú ọ dị ya ka e emelitere site Mmepụta ebe 2005), ma ọ bụ ndị ọzọ VirtualDub uzo ozo .
Top 5 Free Online AVI ka MP4 Ntụgharị
Apụghị Play MP4 Files na Xbox 360?
> Resource> Video> Olee dezie MP4, MKV, Flv, MOV na ndị ọzọ Formats na VirtualDub